ယနေ့မှာတော့ IT ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ issues တွေထဲက ၅ ခုအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ - ICT Consulting Firm ယနေ့မှာတော့ IT ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ issues တွေထဲက ၅ ခုအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ - ICT Consulting Firm
BE SWIFT, BE QUICK, IT'S TECHNOSWIFT BE SWIFT, BE QUICK, IT'S TECHNOSWIFT
ယနေ့မှာတော့ IT ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ issues တွေထဲက ၅ ခုအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
IT ခေတ်ကြီးမှာ cyber security ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အရင်နေ့က ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ CGS ရဲ့ CIO, John Samuel က ” security professional အနေနဲ့ အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပြီး threats တွေကို မျှော်လင့်ထားရမယ်။ ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်း အလွန်လိုအပ်တယ်” လို့ပြောဖူးပါတယ်။
Gartner Data အရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ competitors တွေကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ Digital Transformation ကိုပိုပြီးမြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခြင်းဟာ innovative era တစ်ခုကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖော်ဆောင်နေပါတယ်။
Revenue က organization တွေရဲ့ KPI သဘောမျိုးဖြစ်နေတော့ revenue ကျမသွားဖို့ကြိုးစားရပါတယ်။ အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာတဲ့အတွက် revene stream တွေက သမားရိုးကျ နည်းနဲ့ သွားလို့မရတော့ပါဘူး။ လမ်းကြောင်းအသစ်တွေရှာဖွေလာရပါတယ်။ traditional နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုဖို့ထက် ပိုပြီး brainstorm လုပ်နေရပါပြီ။
Market ထဲမှာ change တစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါ သို့မဟုတ် issue တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြသနာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပြောင်းလဲတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Agility ကောင်းတဲ့ organization ကသာလျှင် ရည်ရှည်အတွက် စိတ်အေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို Internal မှာ ဖြည့်ဆည်းဖို့မလွယ်ခဲ့ရင် (skills gap) တွေရှိခဲ့ရင် outsourcing မဖြစ်မနေလုပ်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မှာတော့ outsourcing ပေးရင်း reliability ပြသနာတွေ၊ Security ပြဿနာတွေ ကြုံရတတ်တာမို့ သတိချပ်သင့်ပါတယ်နော်။ အခုပြောပြသွားတာ‌ကတော့ မျက်မှောက်ခေတ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပအခြေအနေများပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရော ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီလဲ ?
Chief Information Officer အကြောင်း သိကောင်းစရာအပိုင်း (၁)
Cyber Security အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ TBM အကြောင်းနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
Copyright © 2021 Technoswift. All rights reserved
Transformed By B360 Marketing Consulting Firm